About Us - Shanghai Shenyong-dalana, pejy Products Co., Ltd
Shanghai Shenyong specializes tamin'ny nanaovany, famokarana ary ny varotra ny tsipika fiadiana clamp mirona herinaratra. Izany koa dia manome andianà tolotra ho an'ny mpanjifa toy ny fametrahana, fanorenana indray, manamboatra ny fitaovana sy ny milina hoisting fanorenana indray sy manamboatra fitaovana fanaraha-maso ny herinaratra, ny famokarana sy ny varotra ny rafitra, raharaham-barotra Consulting, midona amin-cone, fanodinana ny tranofiara Accessories. Ny orinasa dia mifantoka amin'ny tsena na ao an-trano sy any ivelany, ary nanome ny kilasy A orinasa fikambanana. Tsy specializes amin'ny famokarana herinaratra tsotra sy tantara foronina sy ny fifandraisan-davitra tsipika fiadiana ara clamp Hank mialoha knotting andian-dahatsoratra vokatra. Ny vokatra dia ampiharina be eo amin'ny fifandraisan-davitra, ny hery Network, herinaratra.
Lalamby, ary ny fibre optic-tariby. Ny vokatra no tsara ny mazava, mafy-machining, mora Nametraka famonjena sy ny hery, izay mamela ny ambony izay hafa karazana elektrika sy ny fifandraisan-davitra fiadiana clamps tsy afaka mampitaha.
Ny orinasa dia omena amin'ny fanjakana-avy-ny-kanto sy ny fitaovana ara-teknika ny tena tsara talenta, nanenjika ny iraka fanambarana ny "toetra voalohany, manao ny marina ambony indrindra" sy ny fisoloana vava ny orinasa fanahin'ny "firaisan-kina sy ny pragmatisma enti, fanitarana & fanoloran-tena". Tsy mitondra amin'ny alalan'ny ISO 9001: 2008 Standard feon'ny fieritreretany sy manao indray mandeha-maso ara-fanarahana tahan'ny niakatra ho any 98% sy ny mpanjifa fahafaham-po ny tahan'ny niakatra ho 100% amin'ny alalan'ny tena nitandrina FABRICATION, Siantifika fitantanana, tso-po antoka asa fanompoana sy fahafaham-po. Ny vokatra hitsena ny fangatahana ny fanorenana indray sy ny fananganana tambajotra herinaratra. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa dia hanatsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tolotra foana hanome fahafaham-po izay ilain'ny manaraka fanao iraisam-pirenena, manolotra ny tsara indrindra Ômnia vokany tolotra ho an'ny mpanjifa.
Address: No. 85 ShenXu Road, Songjiang District, Shanghai, Shina